OnePlus7Pro က Flagship Killer အဖြစ်ရှိနေသေးလား?? - PX
OnePlus7Pro က Flagship Killer အဖြစ်ရှိနေသေးလား??
OnePlus ရဲ့ Products တွေ အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တိုင်း အရင် series တွေထက် အဆပေါင်း များစွာ တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ ရမှာပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး စံချိန်တွေ ရိုက်ချိုးခဲ့ရာအခုဆိုရင် India Smartphone Market မှာ Market Leader တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ် OnePlus ရဲ့ ထူးခြား မှု တစ်ခုကတော့ Dual Phone Strategy ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုအရင်က တစ်ပွဲတစ်လုံးကနေ အခုတေည့ တစ်ပွဲ နှစ်လုံး မိတ်ဆက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ OnePlus7Pro က Flagship ဖုန်းတွေနှင့် ရင်ဘောင်တန်း မှာ ဖြစ်ပြီး7က7Pro ကနေ ဝိတ်လျော့ ပြီး ဈေးတန်းနိမ့်တယ့် နေရာ သွားယှဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ OnePlus အနေနဲ့ အတော်လောဘကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်။ ဘယ်ဖုန်းမှာမှမပါသေးတဲ့ Features အချို့ကိုထည့်ပြီး Flagship Level ကိုလည်း တက်လှမ်းချင်သေးတယ်။ တစ်ဖက်က Killer ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်လည်းမပျောက်ချင်တော့ OnePlus7ဆိုပြီးထပ်ထုတ်ပါတယ်။
OnePlus ရဲ့ ဖုန်းတွေက မြန်ရမယ် bloatware ရှင်းရမယ် ဈေးသိပ်မကြီးတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ရမယ်စတဲ့ အချက်တွေ နဲ့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ OnePlus7Pro မှာတော့ ဒီအရာတွေ အပြင် အခြား Industry first ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တွေသယ်ဆောင် လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Industry first ဆိုတာ ကတော့ အချို့ Features တွေက လက်ရှိ ဈေးကွက် ထဲရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ မရှိသေးတဲ့ Features တွေ လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ဥပမာမှာ Display ပိုင်းမှာဆိုရင် 90Hz ရတဲ့ Asus ROG Phone ရှိပေမဲ့ OnePlus7Pro မှာတော့ 6.7 Inch QHD + resolution ရှိတဲ့ Fluid AMOLED Panel မှာ 90 Hz ရတယ်ဆိုတာ ပထမဆုံး Smartphone လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Notch ကို ဖျောက်ပြီး Motorized Selfie Camera ကို သုံးထားတဲ့အတွက် လုံးဝ Full Screen Experience ကိုရစေတယ်။ Chin ကလည်းအပေါ်ဘောင်နဲ့ အညီ ပါးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ တော်တော်လေးသေးသွားတာပါတယ်။ HDR10+ ကိုလည်း Support လုပ်တဲ့ အတွက် Display နှင့် ပတ်သက်ရင် DisplayMate က နေ A+ အဆင့်ထိ ရထားတာ ဖြစ်လို့ မိုက်မှာတော့အသေအချာပါပဲ။ ဒါမဲ့ အချို့ Review မှာတော့ Color Accuracy မှာ S10+ လောက်မကောင်းဘူးလို့ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်။ အနည်းနဲ့အများတော့ ကွာတာလေးရှိပေမဲ့ သေချာပေါက် ကောင်းတဲ့ Display လို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။ Full View ကလည်းဖြစ် Display ကလည်း Quality ကောင်းဆိုတော့ OnePlus fan တွေ ကျေနပ်စေမှာသေချာပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင် အရင် Model တွေလိုပဲ OPPO ရဲ့လက်အောက်ကနေရုံးမထွက်နိုင်သေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Pop-Up လိုအရာမျိုး။ Personal အရဆိုရင် Pop-Up အစား Punch Hole လေးဆိုပိုကောင်းမှာပဲတွေးမိတယ်။
UFC 3.0 Read and Write speed နှင့် Snapdragon 855 Processor တွဲလုံးတွေက လက်ရှိ အမြန်ဆုံးအကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ အရသာကို ခံစားစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် Speed ပိုင်းမှာဆိုရင် OnePlus7Pro က ရှိသမျှ ဖုန်းတွေထဲမှာ Fast and Smooth God လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Camera ပိုင်းမှာပါ။ ကြွားလုံးထုတ်ပြီး DxOMark မှာ 111 ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတောင် ပြသွားပါသေးတယ်။ ဒီ OnePlus7Pro မှာ Sony IMX586 Sensor 48MP ကို f/1.6 Lens၊ Secondary အနေနှင့် 8MP 3x Telephoto Zoom Camera နှင့် 16MP Ultrawide Lens တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ Primary နှင့် Telephoto မှာ Optical Image Stabalization လဲ ပါဝင်ပါအုံးမယ်။ DxOMark က Camera Rating 111 မှတ်အထိ ပေးတဲ့ အတွက် Samsung Galaxy S10 5G နှင့် Huawei P30 Pro ပြီးရင် ဒုတိယနေရာမှာ OnePlus7Pro ကရှိနေပါတယ်။
Pop-up Selfie camera မှာ 16 MP Sony IMX471 ကိုသုံးထားပြီး EIS နှင့် f/2.0 Aperture ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ Pop up လေး တစ်ခါဖွင့်ဖို့ 0.53 second ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus က ဒီ Pop up camera ဟာ အကြိမ်ရေ 300000 အထိ စမ်းသပ်ထားပါတယ်လို ဆိုထားပါတယ်။ ဒါအပြင် YouTube မှာ အချိန် ၁၂ နာရီအကြာ Stress Test လုပ်ပြထားပါသေးတယ်။ Personal အရ Pop-Up မကြိုက်ပေမဲ့ OnePlus ရဲ့ Pop-Up Camera က 48.3 lb လေးတဲ့ ကွန်ကရစ်တုန်းကို ချိတ်ပြီးမပြတာတောင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
Battery အနေနှင့် 4000 mAh ကို Warp Charge 30W နည်းပညာနှင့် အားသွင်းရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါမယ့် 90Hz Display ရယ် သိပ်သည်း လှတဲ့ Pixel density ကြောင့် ဒီ 4000 mAh က လုံလောက်ရုံအဆင့်ပဲရှိပါတယ် ပိုလျှံစွာသုံးလို့မရလောက်ဘူး။ ဒါကို OnePlus အနေနဲ့လည်း 90Hz ကို သုံးရင် Battery ပိုကုန်မယ်လို့ပြေားထားပါတယ်။ ကုန်လည်း ကုန်ချင်စရာပဲလေ QHD+ ကိုမှ 90Hz နဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် On-Screen Time တောင် 4000mAh က ၈ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်ပဲသုံးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Battery ကုန်ခဲ့ရင်တောင် OnePlus ကိုအပြစ်တစ်ခုလို့မမြင်မိဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမှာ Warp Charge ရှိလိုပါ။ အားကုန်နေရင်တောင် ၅ မီးနစ်လောက်တတ် ပြီးရင် အေးဆေးပြန်သုံး။
Security ပိုင်းမှာ Optical In-display Fingerprint ကိုသုံးထားပြီး အရင် OnePlus 6T ထက်အများကြီး ပိုသာလာတယ်။ 0.21 seconds သာကြာတယ် ဆိုတော့ လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲ မှာ အမြန်ဆုံး စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Software အနေနဲ့လည်း2Year update ရမှာဖြစ်ပြီး Security Update က3Year ထိ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းအရ OnePlus7Pro ကို Based version အနေနှင့် $669 ကနေစတင်မှာဖြစ်ပြီး $749 တန်ကတော့ အမြင့်ဆုံး RAM 12GB, ROM 256GB ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒီဈေးကို ကြည့် ရင် Premium Device တစ်ခုအနေနှင့် အခြား Brand ထက် ဈေးချိုနေတာ ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus က အရင် Killer အဆင့်မှာမဟုတ်တော့ပဲ ကိုယ်တိုင်အသတ်ခံချင်လို့ Flagship Level ကိုတတ်လှမ်းတယ် ပြောကြပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ စင်ပေါ်မှာ ထိုးသတ်ချင်လို့ စင်ပေါ်ထိတတ်လာတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ အခြားအနေနဲ့ စံသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ ရေဆိုခံတာပါပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်အထင် 6T ကိုင်ထားတဲ့ OnePlus fan တွေဆိုရင် OnePlus7မျိုးကို Upgrade မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သိပ်မကွာခြားလှတဲ့ Design ကိုမှ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲပြီးထုတ်ထားတာပါ။ Camera နဲ့ LED bump လေးတွေကလွဲလို့ ကျန်တာအတူတူပါပဲ။ SoC 855 ရယ် မပြောင်းလဲထားသော Display ရယ် ပြောင်းလဲထားသော Speaker လေးရယ်မှလွဲပြီး ထူးခြားမှုသိပ်မရှိပါဘူး။ OnePlus7ကတော့ RAM 6GB ကို မြန်မာငွေ ၈ သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ကစနိုင်ပါတယ်။
မတော်လိုက်ရတဲ့ ယောက္ခမ စကားနဲ့ပြောရရင် တစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်မယ် OnePlus ကို Flagship Killer လို့မခေါ်သင့်တော့တာအမှန်ပဲ :P ။ သို့သော်လည်း Premium Market ထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်တယ်လို့လဲပြောမရသေးပါ။ Premium Quality ရှိတဲ့ ဖုန်းကိုကိုင်ချင်တယ် ဈေးလည်းသက်သာချင်တယ်ဆိုရင် OnePlus ကလွဲပြီးလောလာဆယ်မရှိသေးပါလို့ရေးသားရင်း…
OnePlus7Pro ဘယ္ေလာက္ထိ အၾကမ္းခံနို္င္လဲဆိုတာ JerryRig ကစစ္ေဆးျပခဲ့
ထူးထူးခြားခြား ဟင်းချက်စရာ နာမည်ပေးထားတဲ့ Realme X ရဲ့ Special editions version များ